परिवारको रक्षा गर्न एके-४७ उठाउने अफगान किशोरीको सर्वत्र प्रशंसा, तर उनले पतिको हत्या गरिन् कि तालिबान लडाकुको? – News Nepal
September 18, 2021 2:36 PM
१७ अगष्ट २०२०, ११:५० +०५४५
गत महिना आफ्नो घरमा आक्रमण हुँदा १५ वर्षीया नूरियाले एके-४७ राइफल उठाइन् र दुई व्यक्तिको ज्यान लिइन् भने तेस्रोलाई घाइते बनाइदिइन्।
‘नायिका’ को रूपमा उनको चर्चा भयो। तर त्यस रातको घटनापछाडिको कथा निकै जटिल छ। नूरियाले तालिबान आक्रमणकारी वा आफ्नै पतिलाई गोली हानिन् कि दुवैलाई?
(सुरक्षाको निम्ति यसमा उल्लेख गरिएका सबै नाम परिवर्तन गरिएको छ।)
ती मानिसहरू निस्पट्ट अन्धकार भएको बेला गाउँ पुगेका थिए। नूरियाका अनुसार झन्डै १ बजेको थियो। घरको अगाडिको ढोकामा ठूलो आवाज आयो। उनी बिउँझिइन्।
आफ्नो कोठामा शान्त रूपमा उभिइन्। अर्को कोठमा रहेको १२ वर्षीय भाइको बारेमा सोचिन्। उनले अभिभावकलाई ती मानिसहरूले बाहिर लगेको सुनिन्।
बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले त्यस रातको घटनाबारे सुनाएकी छन्। त्यसपछि गोली चलेको सुनेको बताउँदै उनले भनिन्, “उनीहरूले उहाँहरूलाई मारे।”
‘डरलाग्दो त्यो रात’
नूरिया अफगानिस्तानको अस्थिर भागमा पर्ने सानो गाउँमा हुर्किइन्। उनी विस्तारै बोल्ने लजालु स्वभावकी थिइन्। तर बन्दुक चलाउन र निसाना सही ठाउँमा लगाउन आउँथ्यो। सानै छँदादेखि उनलाई बुवाले आत्मरक्षाको तालिम दिएका थिए।
त्यस रात लुक्न छाडेर नूरियाले बुवाको बन्दुक एके-४७ समातिन्। बाहिर रहेका मानिसहरूमाथि गोली हानिन्। उनका भनाइमा गोली नसकिँदासम्म उनले बन्दुक चलाइरहिन्। अनि ती मानिसहरू त्यहाँ पुगेको करिब एक घन्टापछि अँध्यारोमै फर्किए। घर बाहिर पाँचवटा शव छरिएका थिए। ती उनका आमा, बुवा, एक नातेदार छिमेकी वृद्ध र अन्य दुई “आक्रमणकारी”का शव थिए।
“त्यो डरलाग्दो थियो,” उनी भन्छिन्, “उनीहरू निकै क्रूर थिए। मेरो बुवा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, आमा निर्दोष। तर उनीहरूले मारिदिए।”
नूरियाजस्ता अफगानिस्तानमा हुर्किएका किशोरीहरूलाई युद्धबाहेक अरू केही थाहा छैन। त्यहाँ सरकार पक्षीय फौज र तालिबानबीच द्वन्द्व भएको २५ वर्षभन्दा धेरै भयो।
तालिबान लडाकुहरूका साना समूहले उनको ग्रामीण प्रान्त घोरमा सरकार समर्थक फौजको क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु असामान्य घटना होइन।
नूरिया र उनका सुरक्षा अधिकृत पनि रहेका सौतेनी दाजु आफ्ना बुवा आदिवासी अगुवा र सरकार पक्षीय समुदायका नेता भएकाले उनी विद्रोहीको निसानामा रहेको बताउँछन्।
विरोधाभासले निम्त्याएको अन्योल
तर उक्त घटना भएको तीन हप्तापछि यसमा जोडिएका नूरिया, उनका दाजु, आक्रमणकारी भनिएका मृतकका परिवारका सदस्य, स्थानीय प्रहरी, स्थानीय अगुवा, तालिबानका प्रतिनिधि र अफगान सरकारको धारणाले घटनाबारे फरकफरक दृश्य देखाउँछ।
बीबीसीलाई कतिपयले बताएअनुसार त्यस रातका एक सशस्त्र आक्रमणकारी पति थिए र तालिबान लडाकुलाई परास्त गर्ने किशोरीको कथा वास्तवमा एउटा पारिवारिक विवाद थियो। परस्परविरोधी धारणाहरूले नूरियामाथि भएको वास्तविकता अन्त्य गरिदिने खतरा छ।
सबै पक्ष त्यस बिहान सबेरै त्यस गाउँमा आक्रमण भएकोमा एकमत छन्।
सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएको हतियार समाएकी किशोरीको तस्बिर
नूरियाका अनुसार अज्ञात मानिसहरूले आफूलाई तालिबानले भन्ने गरेको ‘मुजाहिद्दीन’ लडाकु भएको र उनको बुवालाई लक्षित गरेर त्यहाँ पुगेको बताएका थिए।
तालिबानले किशोरीसँगको उक्त झडपमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। तर त्यही रात त्यस गाउँमा प्रहरी जाँच केन्द्रलाई निसाना बनाएको पुष्टि गर्दै तालिबानले त्यहाँ दुई आफ्ना सदस्य घाइते भएको तर नमारिएको बताएको छ।
अफगान सरकार र स्थानीय अधिकारीहरूले तालिबान आक्रमणमाथि ठूलो विजय प्राप्त गरेको भन्दै नूरियालाई ‘एक वास्तविक नायिका’ भनेका छन्।
नूरिया र उनका भाइलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट जिल्लाबाहिर सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा किशोरीको आत्मरक्षाको निकै चर्चा भयो।
‘मृतक नूरियाका पति’
बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा दुई मृतकको पहिचान पुष्टि गरेको छ। बीस वर्षआसपासका ती व्यक्तिहरूले परम्परागत अफगानी पोसाक लगाएका थिए।
उनीहरूको कुर्ता रगतले लतपतिएको थियो। तालिबाननिकट सूत्रहरूले घाइते भएर भागेको भनेर प्रहरीले बताएका एक तालिबान कमान्डरले अहिले घाइते भएको स्वीकार गरेका छन्, तर उनी कहिले र कहाँ घाइते भएका हुन् भन्ने पुष्टि गरेनन्।
तर स्थानीय तालिबान सूत्रहरूले पनि घटनामा उपस्थित एक व्यक्ति कैयौँ वर्षअघि दक्षिणी अफगानिस्तानको हेल्मन्ड प्रान्तको तालिबान संयन्त्रमा संलग्न रहेको पुष्टि गरेका छन्।
घटनाको एक हप्तापछि मारिने एक व्यक्ति अज्ञात लडाकु नभई नूरियाका पति भएको खबर आउन थाल्यो।
परिवारका सदस्य र स्थानीय सूत्रहरूले बीबीसीलाई बताएअनुसार पारिवारिक विवादपछि बुवाले आफ्नो घर लगेका नूरियालाई घर फर्काउन उनका पति रहीम त्यहाँ पुगेका थिए।
सूत्रहरूका भनाइमा उनका पति तालिबानको सम्पर्कमा पुगेका थिए र तालिबान लडाकुहरूसँगै त्यहाँ गएका थिए। मारिएका एक पुरुष नूरियाका पति थिए। तर नूरियाले आफ्नो विवाह भएको अस्वीकार गरेकी छन्।
अरू मानिसहरूका अनुसार नूरिया दुई परिवारबीच विवाहका लागि ‘मोखी’ भनिने साटो गर्ने सम्झौताकी एक पात्र थिइन्।
घोर प्रान्तमा उपस्थित सरकारी फौज
रहीमले दोस्रो पत्नीको रूपमा नूरियासँग र नूरियाका बुवाले रहीमकी भतिजीलाई दोस्रो पत्नीको रूपमा विवाह गरेका थिए।
तर उनीहरू सानै थिए। त्यसैले विवाहलाई आधिकारिता दिन उनीहरूले केही वर्ष पर्खिने सहमति थियो।
आमाको व्थया:’गरिबीले शक्तिहीन’
तर अफगानिस्ताको ग्रामीण इलाकाका यस्ता कथाहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन सजिलो छैन। नूरियाको गाउँ अग्ला पहाडले घेरेको समथर भूभागमा छ। फोनमा कुरा गर्न मानिसहरूलाई नजिकैको पहाड चढ्नुपर्छ।
रहीम नूरियाका पति थिए भन्ने पत्ता लगाउन बीबीसीले रहीमकी आमा शफिकासँग सम्पर्क गर्न सफल भयो।
अफगानिस्तानको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रको निमरुज प्रान्तमा उनी छोराकी पहिलो पत्नी र उनका दुई सन्तानसँगै बस्छिन्। फोनमा कुरा गर्दै शफिकाले रहीमले तीन वर्षअघि नूरियासँग र साटो गर्ने सहमतिअनुसार शफिकाकी नातिनी र रहीमकी भतिजीसँग नूरियाका बुवाले बिहे गरेको बताइन्।
तर दुई वर्षभन्दा कम समयमै रहीमले हेल्मन्डमा काम गरिरहेका बेला नूरियाका बुवा अप्रत्यासितत रूपमा गएर छोरीलाई लगेको र आफ्नी नयाँ पत्नीलाई छाडेर गएको शफिकाको भनाइ छ।
शफिका भन्छिन्, “उनले साटोको सम्झौता भङ्ग गरिदिए।”
त्यस बेला विवाद मिलाउन आफूले गाउँका अगुवासँग सहयोग मागेको उनले बताइन्। तर आफूहरू गरिब भएकाले नूरियाका बुवालाई रोक्न नसकेको उनको कथन छ।
उनले आक्रमण भएको रात आफ्नो छोरा नूरियाको घरमा गएको पुष्टि गरिन्, तर कसैको हत्या गर्ने उद्देश्य नरहेको उनको भनाइ छ।
तस्बिर स्रोत, Local Afghan authorities
नूरिया र उनका दुई दाजु भाइ सैनिक हेलिकोप्ट चढ्न जाँदै
उनले भनिन्, “उनीहरू शक्तिशाली थिए, हामी गरिब। मेरो छोरा त्यहाँ आधा रातपछि भएको होइन, नूरियाका बुवाले बोलाएरै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धविच्छेद आदि विषयमा छलफल गर्न साँझै गएको हो।”
उनले आफ्नो छोरा तालिबान लडाकु भएको कुरा अस्वीकार गरिन्। तर रहीमले हेल्मन्डको यात्रा गरेको भनी उनले दिएको समय रहीमले नूरियालाई विवाह गर्नुअघि करिब दुई वर्ष हेल्मन्डमा आफ्नो संयन्त्रको सदस्य रहेको भनी तालिबान सूत्रहरूले दिएको समयसँग मेल खान्छ।
शफिकाका भनाइमा रहीम तालिबान सदस्य नभई निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्थे। उनी भन्छिन्, “आफ्नो जीवनमा कहिल्यै उसले बन्दुक छोएको पनि छैन। हामी गरिब छौँ, हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन।”
शफिकाका अनुसार उनका अर्का छोरा प्रहरी अधिकृत थिए। तर उनको १२ वर्षअघि निमरुजमा आत्मघाती आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो। अब उनको परिवारमा कमाउने पुरुष सदस्य कोही बाँकी रहेनन्।
उनी एक अर्की अफगान महिला हुन् जो आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको हिंसाको चक्रमा फस्न पुगेकी छन्।
नूरियाको प्रान्तका स्थानीय प्रहरी, गाउँका कैयौँ अगुवाहरू र केन्द्रीय सरकारका अधिकारीहरूले नूरिया र रहीमबीच विवाह नभएको कुरामा जोड दिएका छन्। उनीहरूका भनाइमा नूरियाको घरमा तालिबानको निर्धारित हमला थियो र स्पष्ट रूपमा उनका बुवा त्यसको निसानामा थिए।
त्यस रात वास्तवमा के भएको थियो भन्ने निकै कम मानिसलाई थाहा छ। सम्भवत: नूरिया, उनका भाइ र बाँच्न सफल एक आक्रमणकारीलाई मात्रऐ। तच पूरै पगचब कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।